Senior Electrical Engineer Archives - Glory Assumption Space
Senior Electrical Engineer – Female - ( 5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀, ၀၀၀
၁)Senior Electrical Engineer – Female - ( 5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀, ၀၀၀ / သီလ၀ါမြို့နယ် ။ • B.E ( Electrical )ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Document Control ပိုင်းရရမည် ။ • Contract တွေကိုင်ရမည် ။ • Legal Service Contract Management ရရမည် ။ • Technical ပိုင်း Knowledge ရှိရမည် ။ • English စာရရမည် ။ • အသက်ကန့်သတ်မထားပါ ။ • ဖယ်ရီရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။ . သီလဝါမြို.နယ်​ရှိ Construction Company တွင်​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ ရပါမည်​။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သီလ၀ါမြို့နယ်ရှိ Construction Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Electrical Engineer – Female - ( 5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀, ၀၀၀ / သီလ၀ါမြို့နယ်
၁) Senior Electrical Engineer – Female - ( 5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၁,၀၀၀, ၀၀၀ / သီလ၀ါမြို့နယ် ။ • B.E ( Electrical )ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Document Control ပိုင်းရရမည် ။ • Contract တွေကိုင်ရမည် ။ • Legal Service Contract Management ရရမည် ။ • Technical ပိုင်း Knowledge ရှိရမည် ။ • English စာရရမည် ။ • အသက်ကန့်သတ်မထားပါ ။ • ဖယ်ရီရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သီလ၀ါမြို့နယ်ရှိ Construction Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sr. Electrical Engineer - Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကပျြ (အထကျ) /သီလဝါမွို့နယျ။
၁) Sr. Electrical Engineer - Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကပျြ (အထကျ) /သီလဝါမွို့နယျ။ Main Duties and Responsibilities • Lead and participate in operation of 33kv power distribution network • Manage step by step switching of 33kv D/S, LBS and VCB • Manage power energizing and power shut down process of factories and main distribution line • Find the fault location during power outage • Responsible in maintenance and repair work of 33kv power distribution line • Conduct regular maintenance of generator, transformer and LV panel • Communicate with local electrical authority when necessary • Provide leadership and direction to junior engineers and operators • Degree in Electrical Engineering or related engineering field • At least7years’ experience in related field • Experience in Installation/ Maintenance/ Operation of Medium Voltage (or) High Voltage, Underground Line, Overhead Line and Transformer etc. • Good Command of English • Proficiency in MS Word, Excel, Internet and Email GAS Recruitment နှငျ့ ခြိတျဆကျထားသော သီလဝါမွိုနယျ တှငျရှိသော Construction Company တှငျတာဝနျထမျးဆောငျရနျ အထကျပါဝနျထမျးမြား အမွနျအလိုရှိသညျ ။ မှတျခကျြ ။ ။ လေြာကျထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါတညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ ) [caption id="attachment_5250" align="alignnone" width="300"] May 06, 2019-Queens, NY- Governor Andrew Cuomo surveys the progress on the West bound span of the New Koscuiuszko Bridge and announces the bridge to open this coming September, four years ahead of schedule.[/caption]
Sr. Electrical Engineer - Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
၁) Sr. Electrical Engineer - Male/Female - (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) /သီလ၀ါမြို့နယ်။ Main Duties and Responsibilities • Lead and participate in operation of 33kv power distribution network • Manage step by step switching of 33kv D/S, LBS and VCB • Manage power energizing and power shut down process of factories and main distribution line • Find the fault location during power outage • Responsible in maintenance and repair work of 33kv power distribution line • Conduct regular maintenance of generator, transformer and LV panel • Communicate with local electrical authority when necessary • Provide leadership and direction to junior engineers and operators • Degree in Electrical Engineering or related engineering field • At least7years’ experience in related field • Experience in Installation/ Maintenance/ Operation of Medium Voltage (or) High Voltage, Underground Line, Overhead Line and Transformer etc. • Good Command of English • Proficiency in MS Word, Excel, Internet and Email GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သီလ၀ါမြိုနယ် တွင်ရှိသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )